ဖုန်းဂိမ်းတွေဆော့တဲ့ အခါ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ဆော့နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ထားသင့်လဲ? - Shop
ဖုန်းဂိမ်းတွေဆော့တဲ့ အခါ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ဆော့နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ထားသင့်လဲ?0414
The KaungHtet September 29, 2020 10:45 am January 11, 2022
ဂိမ်းတွေဆော့တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေလက်ချွေးထွက်တာ Key တွေလွတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် First Person/ Third Person ဂိမ်းတွေမှာဆိုရင် ခြေသံတွေကို နားထောင်ရတာ ဘယ်နဲ့ညာ တိတိကျကျသိဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင် နားကြပ်ကောင်းကောင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ ကဲအဲ့တာဆိုရင် ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါ ကိုယ့်ကို ပိုပြီး Skill ကျကျဆော့လို့ရဖို့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဂိမ်းခလုတ်တွေဟာဆိုရင် ရိုးရိုး PS2/PS3 ဂိမ်းတွေလိုမဟုတ်ပဲဖုန်းနှင့်တွဲပြီး ဆော့ရတဲ့ ဂိမ်းခလုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဂိမ်းခလုတ်တွေထဲမှာမှ ဖုန်းကို ထည့်ပြီး သုံးရတဲ့ခလုတ်တွေနဲ့ ဖုန်းမှာခလုတ်လေးတွေတပ်ပြီး သုံးရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုဂိမ်းခလုတ်တွေထဲမှာမှ android နဲ့ Ios အတွက် အသုံးပြုရတဲ့ ဂိမ်းခလုတ်တွေလဲ မတူကြပါဖူး။ Ios တွေအတွက်ကတော့ ဖုန်းမှာတပ်လို့ရတဲ့ ဂိမ်းခလုတ်တွေကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Android တွေအတွက် ကတော့ Usb cable နဲ့ ခလုတ်တွေရော၊ ဖုန်းထည့်ပြီး အသုံးပြုလုပ်ရတဲ့ခလုတ်တွေရော ဘယ်ဟာ သုံးသုံး အဆင်ပြေပါတယ်။
နားကြပ်တွေကတော့ ဂိမ်းဆော့တာတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအတွက် အရေးကြိးဆုံးအရာတစ်ခုပါပဲ။ Pubg တို့ Free Fire တို့အပြင် Mobile legend ဆော့တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ ကိုယ့် Teammate တွေနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက် နားကြပ်ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုလိုပါတယ်။ ကဲ အဲ့တာဆိုရင် ဂိမ်းသံတွေသေသေချာချာနားထောင်ရဖို့အတွက် ဘယ်လို System Requirement တွေကိုလဲသေချာ ကြည့်ရှုပြီးဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။ 360 sound effect ပါတဲ့ နားကြပ်တွေဆိုပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
Power Bank တွေဟာဆိုရင် ဖုန်းဂိမ်းတွေအဆော့များတဲ့သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ထဲကတစ်ခုပါပဲ။ ဂိမ်းဆော့တာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှဖုန်းအားတွေကလဲ အကုန်မြန်လာတတ်ပါတယ်။ အိမ်မှာနေရင်းဆော့ နေတဲ့ ချိန်တွေဆို အားကုန်ရင် သွင်းရင်းဆော့လို့ရပေမယ့် အပြင်မှာဆိုရင်တော့ အားသွင်းဖို့မလွယ်ကူတဲ့အတွက် power bank တွေဟာ အရမ်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်မှာနေရင်းလဲ တစ်ခါတစ်လေမီးပျက်တတ်တဲ့ အတွက် power bank တစ်လုံးလောက်ကတော့ မရှိမဖြစ်ဝယ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဖုန်းဂိမ်းတွေအဆော့များတဲ့ သူတွေအတွက် ဂိမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို Shop App MM မှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။
အထက်ပါပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လင့်ခ်တစ်ခုချင်းစီကိုနှိပ်၍ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
📲 သင့်ဖုန်းထဲမှာ Shop App MM ရှိရုံနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဈေးဝယ်နိုင်လို့ ခုပဲ Download လုပ်လိုက်ရအောင် ….
Previous Articleနံရံကပ်ပန်ကာတွေအကြောင်းသင်လေ့လာဖူးလား?Next ArticleApple MacBook မဝယ်ခင် သိထားသင့်တဲ့အချက်များ
စမတ်ဖုန်းလောကရဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဆရာနှစ် ၂ဆူရဲ့ အားပြိုင်မှု